के हो आईएलओ १६९ ? - [2008-09-14]
के हो आईएलओ १६९ ?
प्राय द्वन्द्वरत राष्ट्रमा राज्यले आदिवासी जनजातिमाथि गरेको विभेद नै द्वन्द्वको कारक तत्त्व बन्दै आएको छ। त्यसैले पनि राज्यले हरेक कार्यमा उनीहरूलाई सहभागिता गराउँदै समान हक-अधिकार दिने आईएलओ १६९ ले नयाँ नेपालको शान्ति प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर १६९ (आईएलओ १६९) भनेको के हो - यसमा के हुन्छ ?
आईएलओ १६९ भन्नाले राज्य र आदिवासी जनजाति मिलेर बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो। जुन राष्ट्रले यो महासन्धिको सदस्यता लिएको हुन्छ त्यसले राष्ट्रको नीति निर्माण तथा विकास कार्यमा आदिवासी जनजातिसँग साझेदारी र सहकारी गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता सिर्जना गर्छ। यसले आदिवासी जनजातिको हरेक अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको हुन्छ।
आईएलओ १६९ मा आदिवासी जनजातिको कस्तो अधिकार किटान गरिएको हुन्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताभित्र पर्ने मानवअधिकारका सम्पूर्ण पक्षसहित आदिवासी जनजातिको पहिचान भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्परालाई सुरक्षित गरिनर्ुपर्छ। साथै राज्यले विकास गर्दा हरेक आदिवासी जनजातिको थातथलो र दैनिकी जीवनमा असर पर्ने गरी अथवा उनीहरूको विस्थापित हुने गरी कुनै पनि काम गर्न पाइँदैन। राज्यले हरेक नीति निर्माणमा आदिवासी जनजातिको उपलब्धिमूलक सहभागिता अनिवार्य गराउनुपर्छ।
भदौ २९ गतेदेखि नेपाल सरकारले आईएलओ १६९ लाई लागू गर्दै छ। नयाँ नेपालको शान्ति प्रक्रियामा यसले कस्तो भूमिका खेल्ने ठान्नुहुन्छ ?
प्रायः द्वन्द्वरत राष्ट्रमा राज्यले आदिवासी जनजातिमाथि गरेको विभेद नै द्वन्द्वको कारक तत्त्व बन्दै आएको छ। त्यसैले पनि राज्यले हरेक कार्यमा उनीहरूलाई सहभागिता गराउँदै समान हकअधिकार दिने आईएलओ १६९ ले नयाँ नेपालको शान्ति प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। भर्खरै संघीय गणतन्त्रात्मक राज्यमा परिणत भएर नयाँ संविधान निर्माणक्रममा रहेको नेपालको निम्ति त अझ यसको भूमिका गहन हुनेछ। राज्यले यसलाई लागू गरेपछि एक वर्षा राज्यले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हरेक मन्त्रालयमा एक प्रतिनिधिको व्यवस्था र २३ सदसीय समिति पनि गठन गरिसकेको छ।
विश्वको कति राष्ट्रमा आईएलओ १६९ लागू गरिएको छ - र, कस्तो प्रभाव परेको छ ?
हालसम्म विश्वका १९ राष्ट्रले लागू गरिसकेको छ। ३५ वर्षद्वन्द्वमा फसेका ग्वाटेमालामा आईएलओ १६९ लागू गरेपछि सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। राज्य र आदिवासी जनजाति सक्रिय भएर लागे मात्रै सकारात्मक उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसैले हरेक आदिवासी जनजाति आईएलओ १६९ प्रति जागरुक र सचेत हुन आवश्यक छ।
- मञ्जु गुरुङ